सेक्सले पनि शरीर सुन्दर बनाउँछ ! « Naya Page
सेक्सले पनि शरीर सुन्दर बनाउँछ !
काठमाडौं, ३० मंसिर । शारीरिक सम्पर्कका बारेमा मानिसहरू खुलेर बहस गर्न चाहँदैनन् । कतिपय सेक्सबारेको समस्यासमेत बताउन नसक्दा गम्भीर रोगको सिकार पनि भइरहेका हुन्छन् । तर, शारीरिक सम्बन्ध मानिसका लागि आवश्यक त छ नै, यसले स्वास्थ्यमा अनेकौँ फाइदा पनि पुर्‍याउने गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ । शारीरिक सम्बन्धले स्किन र कपाललाई समेत सुन्दर र चम्किलो बनाउन भूमिका खेल्ने एक अनुसन्धानले देखाएको छ ।